धिरज मगरले अनमोल र प्रदीपको स्थान ओगट्लान्? - Dainik Online Dainik Online
धिरज मगरले अनमोल र प्रदीपको स्थान ओगट्लान्?
प्रकाशित मिति : १३ भाद्र २०७८, आइतबार ४ : १३
काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपाली फिल्ममा चकलेटी हिरोहरु धेरै डिमाण्डमा रहने गरेका छन्। अनमोल केसी र प्रदीप खड्का चकलेटी अनुहारको अग्रपंक्तिमा रहने नाम हुन् । त्यसो त यो लिस्टमा सलिनमान बनियाँ पनि नपर्ने होइनन्।
तर, उनले फिल्म नगर्दा उनको लोकप्रियता पनि घट्दो छ। यस्तै, यो लिस्टमा पर्दैछन् धिरज मगर। डेब्यु फिल्म ’इन्टु मिन्टु लन्डनमा’मार्फत नै एक किसिमको क्रेज बनाइसकेका छन्, धिरजले। तर, त्यसपछि उनी पर्दामा फर्किएका छैनन्।
यद्यपि, उनले डेब्यु निर्देशक रेनाशा वान्तवा राईकै फिल्म ’आइ एम ट्वान्टी वान’मा काम गरिसकेका छन् भने सुरेन्द्र पौडेलको निर्देशनमा तयार भइरहेको फिल्म ’बाबरी’ मा पनि काम गरिरहेका छन्।
अर्थात कोरोनाभाइरसको कारण सिर्जित अवस्था सहज भएमा उनको दुई फिल्म केही समयको अन्तरालमा प्रदर्शनमा आउनेछ। युवा पुस्तामाझ आफ्नो बलियो उपस्थिति बनाउने तयारीमा रहेका धिरजको सम्भावना बलियो भइरहेको छ।
निर्देशन र निर्माताले फिल्मका लागि खोजिने नयाँ अनुहारमा धिरजको माग बढ्दो देखिएको हो। भ्लगरको रुपमा चिनिएका धिरज यतिबेला चकलेटी ब्वाइको रुपमा चिनिँदैछन् । पछिल्लो समय लभ स्टोरी फिल्मका लागि चकलेटी ब्वाइको खोजीमा रहेका धेरै निर्माता तथा निर्देशकको आँखा उनीमा अडिएको छ।
अभिनय ठीकठाक र चल्क्लेटी लुक्स भएकै कारण धिरज मार्क भएका हुन्। भ्लगगरको रुपमा देख्दै आएका उनलाई दर्शकले डेब्यु फिल्ममा रुचाए। डेब्यु फिल्ममार्फत नै चकलेटी हिरोमा सम्भावना देखाएका धिरजले आउँदो दुई फिल्ममार्फत यो क्रेजलाई घटाउँछन् या बढाउँछन् यो भने आउने दिनले नै बताउँनेछ ।
यद्यपि, धिरजको सक्रियताले नयाँ अनुहार रुचाउने निर्माता तथा निर्देशकलाई केही राहत भने पक्कै दिएको छ।
नेपालकै ठूलो डान्स रियालिटी शो कार्तिक ११ बाट शुरु हुने